बेलायती प्रधानमन्त्री टेरिजाको दोस्रो ठूलो हार Kasthamandap Daily
बेलायती प्रधानमन्त्री टेरिजाको दोस्रो ठूलो हार
एजेन्सी, बीबीसी । बेलायती संसदमा प्रधानमन्त्री टेरिजा मेले ब्रेग्जिटको मुद्दामा थप अर्को ठूलो हार व्यवहार्नु परेको छ ।
टेरिजा मेले प्रस्ताव गरेको युरोपेली संघ इयूबाट ब्रिटेन बाहिरिने सम्झौता दोस्रोपटक अस्विकृत भएको छ ।
बेलायती सांसदले ब्रेग्जिट सम्झौतामा प्रधानमन्त्री टेरिजा मे को संशाधित मस्यौदालाई ठूलो अन्तरले खारेज गरिदिएको छ ।
सांसदले सम्झौताको यो मस्यौदालाई यसपटक १४९ को भोटअन्तरले खारेज गरेका छन् । यो अन्तर जनवरीभन्दा पनि धेरै हो । सोमबार अबेर राती युरोपेली संघका नेताबीच छलफल गरिरहेकी टेरिजा मेले सांसदहरुलाई कि त ब्रेग्जिटको संशोधित मस्यौदालाई समर्थन गर्न वा त ब्रेग्जिटलाई नै अस्विकार गर्न अपिल गरेकी थिइन् ।
मेले के भनिन् ?
मंगलबार साँझ संसदमा थकित र स्वर बसेको लवजमा बोल्दै प्रधानमन्त्री टरिजा मेले आफू निकै दुस्खित् भएको बताइन्।
तर उनको भनाइ थियो, ुम अझै पनि के कुरामा विश्वस्त छु भने सबैभन्दा उपयुक्त नतिजा भनेको व्यवस्थित रूपबाट सम्झौतासहित इयु छाड्नु नै हुनेछ। र हामीहरूले तय गरेको सम्झौता नै हामीसँग उपलब्ध भएकोमध्ये सबैभन्दा उपयुक्त समेत हो।
मेले सांसदहरूलाई ढिलो गरि हुने बहिर्गमन चाहेको वा अर्को जनमत संग्रह चाहेकोमा निर्णय लिन भनेकी छन्। अथवा सम्झौता सहित इयु छाड्न चाहेको तर यो सम्झौता नचाहेकोु भन्नेमा समेत स्पष्ट हुन भनेकी छन् ।
ब्रिटेनसामु भएका ती विकल्प सहज नभएको बताएकी उनले आफ्नो प्रस्ताव अस्वीकृत भएपनि ती सामना गर्नुको विकल्प समेत नहुने बताइन् ।
बिना कुनै सम्झौता इयु छाडिने अवस्थामा आयरल्याण्डसँगको सीमा व्यवस्थापन कसरी गरिने भन्ने योजना बुधवार सरकारले घोषणा गर्ने उनको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री टेरिजा मेले ब्रेग्जिट सम्झौता खारेज भएपछि आगामी मार्च २९ तारिखमा ब्रिटेन कुनै सम्झौता बिना नै इयुबाट बाहिरिने बाहिरिने कि नबाहिरिने अथवा कुनै सम्झौता बिना सांसदहरु युरोपेली संघबाट बाहिरिन तयार हुँदैनन् भने ब्रेग्जिटलाई लम्ब्याउने वा नलम्ब्याउने भनेर मतदान गर्ने जानकारी दिएकी छिन् ।
प्रधानमन्त्री मेले यदि बुधबार संसदले बिना सम्झौताको ब्रेग्जिटलाई स्विकोराक्ति दिन्छ भने यूकेलाई ईयूबाट बाहिर निकाल्ने प्रक्रियाका लागि मतदान हुने बताएकी छिन् ।
ब्रिटेनमा भएका पछिल्ला विकासक्रमलाई युरोपेली नेताहरूले चिन्तापूर्ण रूपमा हेरिरहेका छन् ।
नयाँदिल्ली । भारतीय राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व खेलाडी गौतम गम्भीर भारतीय लोकसभा ...
काठमाडौं । भारतीय कांग्रेसका अध्यक्ष राहुल गान्धीले आफ्नाो हार स्वीकार्दै भारतीय जनता ...
सबैको साथ र विश्वासले भारत विजयीः मोदी
एजेन्सी । सबैको साथ सबैको विकास र सबैको विश्वासले भारत बिजयी भएको भारतीय प्रधानमन्त्री ...
भारतीय लोकसभा निर्वाचनः सत्तारुढ दल अघि विपक्षी धेरै पछि
काठमाडौं । भारतमा जारी लोकसभा निर्वाचनको मतगणनामा सत्तारुढ गठबन्धन एनडीए ३१० स्थानमा अगाडि छ ...
भारतमा आज मतगणना, कसले मार्ला बाजी ?
एजेन्सी । भारतमा लोकसभाका लागि सात चरणमा ५४२ सिटका लागि भएको चुनावको मतगणना आजबाट शुरु हुने ...
अमेरिकासँग युद्ध गरे इरान ध्वस्त: ट्रम्प
अमेरिका । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानले अमेरिकाविरुद्ध युद्ध चाहिरहेको भन्दै ...
अमेरिकामा राष्ट्रिय संकटकालको घोषणा
एजेन्सी । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले विदेशी साइबर हमलाको स्थितीमा अमेरिकी ...
नयाँदिल्ली– भारतको आन्ध्र प्रदेशमा शनिबार भएको बस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या १५ ...
मुकेश अम्बानीले किने अर्बौको खेलौना पसल
एजेन्सी । भारतीय धनाढ्य मुकेश अम्बानीले ८ करोड ८० लाख अमेरिकी डलरमा अढाई शताब्दी भन्दा पुरानो ...